४० वर्षपहिले हत्या भयो लाश भेटिएन, ४० वर्षपछि डुम्रीको रुखले खोलिदियो सबै रहस्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
४० वर्षपहिले हत्या भयो लाश भेटिएन, ४० वर्षपछि डुम्रीको रुखले खोलिदियो सबै रहस्य
एजेन्सी। ४० वर्ष पहिले एक व्यक्तिको हत्या भयो । तर, उनको लाश पनि भेटिए । ४० वर्षपछि अहिले आएर एउटा डुम्रीको रुखले सबै हत्याको रहस्य खोलिदिएको छ । सुदा निकै अविश्वसनीय लाग्ने यो सत्य घटना ग्रीसमा भएको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार १९७४ मा अहमेट हग्र्युनर नामका यी व्यक्तिको ग्रिस र टर्कीबीच युद्ध भइरहँदा हत्या भएको थियो । वर्षौसम्म उनको शव भेटिएन । तर जहाँ उनको मृत्यु भएको थियो त्यहाँ एउटा रुख उम्रियो । यही रुखले उनको हत्याको रहस्य खोलिदिएको हो ।
यो रुखमा २०११ मा पहिलोपटक वैज्ञानिकको ध्यान गएको थियो । यो रुख गुफाभित्रबाट उम्रिएको थियो । गुफाभित्रबाट एउटा प्वालबाट छिरेर बाहिर निस्किएको रुख निकै असामान्य थियो । एक त गुफाभित्र रुख उम्रिनु नै अनौठो थियो त्यसमाथि जुन क्षेत्रमा यो रुख उम्रिएको थियो त्यहाँ सामान्यतया डुम्रीको रुख नै हुँदैनथ्यो । किनकि त्यहाँको मौसम डुम्री पाइने खालको थिएन । रुख निकै आश्चर्यजनक ठाउँमा उम्रिएको देखेपछि वैज्ञानिकले यसको अनुसन्धान थाले अनुसन्धानमा हत्याको रहस्य खुलेको हो ।
रुख निकै अनौठो लागेपछि वैज्ञानिकले रुखको फेदवरिपरि खनेर हेरे । त्यहाँ ३ व्यक्तिको कंकाल भेटियो । कंकालसँगै ती व्यक्तिका कपडा पनि त्यहीँ थिए । जाँचको क्रममा थाहा भयो कि यहाँ अहमेट हग्र्युनरसहित ३ जनालाई डाइनामाइट पड्काएर मारिएको थियो । विष्फोटका क्रममा गुफाको माथिल्लो भागमा प्वाल पर्यो । जहाँबाट भित्र छिरेको प्रकाशले बिरुवा हुर्किन सघायो । यही प्वालबाट पछि त्यो रुख ठूलो हुँदै बाहिर निस्कियो । वैज्ञानिकका अनुसार हग्र्युनरले मर्नुअघि डुम्री खाएका थिए जसको बीउ उनको पेटमा थियो । त्यही बीउ उम्रिएर पछि ठूलो रुख बन्यो ।
हग्र्युनरकी बहिनी मुनुर हग्र्युनरले बताएअनुसार जुन गाउँमा उनीहरु बस्थे त्यहाँको आधा जनसंख्या ग्रीसको र आधा जनसंख्या टर्कीको थियो । यो गाउँमा ४ हजार मानिसहरु बस्थे । १९७४ मा युद्ध सुरु भएको थियो । उनका दाजु टर्कीको रसिस्टेन्ट अर्गनाइजेशनमा भर्ना भए । १० जुनका दिन ग्रिसको सेनाले उनको दाजुलाई पक्राउ गरेर लिएर गए । त्यसपछि उनको हत्या गरिएको अनुमान गरिएको छ । कंकालको डिएनए परीक्षणबाट उनी हग्र्युनर नै भएको पुष्टि भएको छ ।